Incwadana ye-imeyile yokwenza imali: Iindlela ezimbini ezinokubakho zeBlogger kunye nabaPapashi beMicro
NgoLwesibini, Aprili 10, 2012 NgoMvulo, nge-17 kaDisemba ngo-2018 UScott Hardigree
Impembelelo ayiseyona idomain ekhethekileyo yabapapashi abakhulu. Iibhola zamehlo kunye nentengiso yeedola ziyaphambukiselwa kumkhosi wabapapashi abancinci, abancinci; nokuba banelisekile ngabagcini, iibhlog, ii-vlogger, okanye iipodcasters.
Ngenxa yemfuno eyandileyo, aba bapapashi-mincinci bajonge ngokufanelekileyo iindlela zokufumana inzuzo ngokunzulu kubaphulaphuli babo, kunye nomzamo wabo.
Inzuzo kwiincwadana ze-imeyile
Kunye namanye amaqhinga okwenza imali abawasebenzisayo ngoku, njengokubonisa iintengiso kwiwebhusayithi kunye nenkxaso yemithombo yeendaba kwezentlalo, abapapashi abakhethekileyo banamhlanje baneendlela ezimbalwa ezinokubaluleka zokwenza imali ngeeleta zabo ze-imeyile.
Ukwenza imali kwimpahla ye-imeyile yomshicileli ayisiyonto intsha kodwa kude kube ngoku bekukho imiqobo ebonakalayo, njengobuncinci besayizi yoluhlu, ebikhuphela ngaphandle abapapashi abancinci ekuthatheni inxaxheba.
Njenge Inkonzo epheleleyo ye-imeyile yokuthengisa ngomnqweno wokupapasha, sisebenzise amaqhinga aliqela ukunceda iibhlogi zikhulise ingeniso yazo ye-imeyile-ngaphandle kokuba bathengise ngokuthe ngqo okanye bandise umthwalo wabo. Nazi izinto ezimbini ozithandayo:
Iintengiso kwiincwadana ze-imeyile
Sibonile ukuba iintengiso zibonisa, zisongelwe ngaphakathi okanye zijikeleze ii-imeyile, ngumlingisi onamandla xa kuthelekiswa nexabiso; yabathengisi kunye nabapapashi ngokufanayo.
Martech Zone isebenzisa enye yeenethiwekhi ezinkulu zentengiso ye-imeyile, Ikamva, ukwenza imali kwincwadana.
Incwadana yeHacker, epapashwa ngu UKale Davis, icofwe Qalisa iBit ukufaka i-ad enye ngamandla kwincwadana nganye. U-Kale usebenzisa iMailChimp njengomboneleli wakhe we-imeyile odityaniswe neLaunchBit; ukwenza ukhetho lwentengiso lube lula kunye nenaliti ngokuzenzekelayo.
Ngapha koko, UDan Lewis kunye Ngoku ndiyazi ibonisa iintengiso ezininzi kwincwadana yakhe. UDan usebenzisa Ikamva kunye neLaunchBit. Zombini ezi zidibanisa ngokuqinileyo nomboneleli ngenkonzo we-imeyile.
I-imeyile exhasiweyo (aka Uluhlu lweimeyile Rental)
Uluhlu lokuqeshisa uluhlu lwe-imeyile lutshintshile kule minyaka idlulileyo, ukuba ngcono. Sukundenza impazamo, kusekho uluhlu lweenkampani zoluhlu eziqeshisayo, okanye ezithengisayo, uluhlu lwe-imeyile olungenaxabiso kodwa kuyinyani ukuba uluhlu lwe-imeyile lokwenyani luyaqhubeka nokuba ngumdlali owomeleleyo. Nangona kunjalo, uninzi lwabapapashi abancinci bayathandabuza nokuthathela ingqalelo uluhlu lwe-imeyile njengesicwangciso sokwenza imali.
Mhlawumbi kungenxa yokuba abapapashi be-niche banonxibelelwano olusondeleyo, ngakumbi kunye nababhalisi babo kwaye abafuni kujongeka njengabaxhamli. Mhlawumbi kukusilela kokuqonda loluphi uluhlu lokurenta ngempela kufakwa.
Okanye mhlawumbi libala nje eligama eliphelisa abapapashi abatsha. Endaweni "yoluhlu lwe-imeyile eziqeshisayo" besisoloko sibhekisa kuyo njengee-imeyile ezixhasiweyo okanye ii-imeyile ezinikezelweyo, kuthathelwa ingqalelo ukuba umnikezeli womthengisi uhlala esongelwe kubapapashi be-imeyile template, kufanelekile.
Nantsi i-imeyile exhaswayo evela Yonke imihla; upapasho oluhambisa iingcebiso ezisebenzayo kwimali yobuqu mihla le kwabasetyhini. Kulo mzekelo umthengisi yiShoMMint.
Apha ngezantsi kukho umzekelo ovela kuWilson Web, opapasha UkuThengiswa kweWebhu namhlanje Incwadana ene-ecommerce, intengiso ye-imeyile, kunye neengcebiso zokuthengisa iwebhusayithi. Umthengisi nguLyris, umboneleli ngeenkonzo zokuthengisa nge-imeyile.
Kumava am, iinkampani zoluhlu lwe-imeyile zangoku zenza umsebenzi olungileyo wokulungelelanisa abathengisi abanabaphulaphuli. Itekhnoloji kunye nendawo yentengiso ihambele phambili kakhulu ivumela umthengisi, okanye uluhlu lwabarhwebi, ukuba baqeshe ngokulula uluhlu, benze amaphulo, kunye nokusebenza kovavanyo.
Luyintoni uxanduva loMshicileli?
Uthungelwano lokubonisa i-imeyile kunye noluhlu lwe-imeyile iinkampani eziqeshisayo zenza ukuba iileta zokwenza imali kube lula kubapapashi. Ukusuka ekujongeni nasekuthengiseni ukuya kwingxelo kunye neentlawulo, bayazenza zonke izinto.
Uxanduva lomshicileli oluqhubekayo lukhawulelwe ekukhetheni / ekwamkeleni intengiso / intengiso kunye nokuqhubeka nokubandakanya ababhalisi babo.
Ngaba umpapashi alindele ukuba enze malini?
Iintengiso eziboniswa ngemeyile-Iintengiso ezibonisa i-imeyile zihlala zithengwa kwisiseko sokusebenza, njengeendleko-ngokunqakraza okanye kwiindleko-ngembonakalo, ngenxa yoko ke eyona milinganiselo isetyenziselwa ukuqikelela nokubala ingeniso Ixabiso elifanelekileyo-ngewaka okanye eCPM. I-eCPM ibalwa ngokwahlulahlula umvuzo opheleleyo ngenani elipheleleyo lokuvela kumawaka. Xa ebuzwa malunga ne-eCPMs yabo ephakathi, uElizabeth Yin, uMseki-mbumbano eLaunchBit, uthi "kukho uluhlu olwahlukileyo, ukusuka kwiidola ezimbalwa ukuya kuthi ga kwi-100 ye-eCPM (kuvulwa)." Uqhubeka athi “ezona ncwadana zintle ziyathanda ThrillistAbathengisa uluhlu lweempahla zabo, bafumana i- $ 275 ye-eCPM ngokuxhomekeke kwifomathi yentengiso. ”
Ii-imeyile ezinikezelweyo -Ii-imeyile ezinikezelweyo zihlala zithengwa kwi iindleko-ngewaka, okanye i-CPM, oko kuthetha ukuba abapapashi bafumana intlawulo ethe tyaba kuyo yonke iwaka leemeyile ezithunyelweyo, kunye nemirhumo eyongezelelweyo kulo naluphi na ujoliso oluceliweyo ngumthengisi. Intlawulo ayibophelelwanga kwintsebenzo, nangona kunjalo uluhlu olwenziweyo olungalunganga luza kukhutshwa ngokukhawuleza nangaluphi na uluhlu lwenkampani eqeshisayo efanele ityuwa yayo. Ii-imeyile ezinikezelweyo zibalelwa kumyinge wama- $ 80- $ 250 CPM, ngokwe Worldata's Uluhlu lwamaxabiso Index, Ngezinto ezithile zeshishini ukuya kwishishini kunye noludwe lwe-imeyile lwamanye amazwe olungena kangange- $ 400 CPM. Ngokusekwe kumanani akhoyo ukuhlawulwa kwe-imeyile ezinikezelweyo okanye exhaswa ngemali kukhulu kunezibhengezo ze-imeyile, kodwa abapapashi abanengqondo baya kukhetha ukuba bazithumela kangaphi ezi imeyile bazinikeleyo; ke ngoko kukho amathuba ambalwa okufumana inzuzo kuluhlu lwe-imeyile eziqeshisayo.
Ukwahlukana kwengeniso -Zombini ii-imeyile zibonisa intengiso kunye noluhlu lwe-imeyile iinkampani eziqeshisayo zisebenza ngendlela yokusebenza Oko kuthetha ukuba akukho mrhumo kumshicileli, endaweni yoko babelana nje ngengeniso evela kumthengisi. Umzekelo, ngoluhlu lwe-imeyile oluqeshisayo, umvakalisi uya kugcina i-50% -80% yazo zonke iodolo yoluhlu lokurenta. Ingeniso yokwahlulahlula ukubonisa iintengiso ze-imeyile, nangona kunjalo, kunzima ukuyicofa.
Ukuba abaphulaphuli bakho bakwimfuno ephezulu, unako kwaye kufuneka uhlawulwe ngokufikelela kuyo. Ungasoloko uthengisa uluhlu lwakho lwe-imeyile ngokwakho, kodwa amava andibonisile ukuba uya kufumana umvuzo omncinci ngelixa uwusebenzela nzima. Ingakumbi kuluhlu lwe-imeyile oluqeshisayo.
Njengomshicileli omncinci wentengiso esebenzayo ngokwabo, kokukhona kuya kubakho imfuno yomxholo wabo. Oko kuya kuqhuba ukukhula koluhlu, abanokwenza ngalo imali ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo, nokuba bakhetha ukusebenzisa iintengiso ezixhasiweyo, ii-imeyile ezixhasiweyo, okanye nayiphi na enye indlela.
Ndithi, abapapashi abaxakekileyo kunokuba ngcono ukushiya indlela yokwenza ngokungangqalanga kwiingcali kwaye kuvavanye onke amaqhinga afanelekileyo abaphulaphuli. Uthini wena?
tags: email MarketingQalisaedlibUmvakalisi
Sebenzisa iMithombo yeendaba yoLuntu ukukhulisa uMsitho wakho olandelayo
Epreli 18, 2012 ngo-7: 23 AM
Ndiphuhlisa incwadana yam yokuqala kwaye olu lulwazi oluhle kakhulu ukuba ndilusebenzise. Enkosi.